संसारभरिका ७ हजारभन्दा बढी वैज्ञानिक र चिकित्सकहरूले राजनीतिकर्मीहरूलाई कोभिड व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले हर्ड इम्युनिटीको रणनीति अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
विभिन्न सरकारहरूले लगाएको लकडाउनविरुद्धको घोषणापत्र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सुनेत्रा गुप्ता, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका डा जय भट्टाचार्य र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका डा मार्टिन कलडोर्फले यो घोषणापत्र लेखेका हुन् ।
तर गुप्ताका अभिव्यक्तिहरूलाई धेरैले बेवास्ता गरेका छन् ।
यो राजनीतिकर्मीले बेवास्ता गर्न मिल्ने आलोकाँचो सामाजिक सञ्जाल अभियान हैन । द ग्रेट ब्यारिङटन डिक्लेरेसन भन्ने शीर्षकसहितको आधिकारिक दस्तावेज हो ।
यस घोषणापत्रको तर्क यसप्रकार छ ः ‘अहिलेको लकडाउन नीतिले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा ठूला असरहरू पारेको छ । खोपका लागि कुरिबस्दा अपूरणीय क्षति पुग्छ । यसको साटो केन्द्रीकृत सुरक्षा अपनाउनुपर्छ । स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई बाहिर जान दिएर हर्ड इम्युनिटी विकसित गर्न लगाउने अनि वृद्धहरूलाई सुरक्षित राख्ने ।
तर अधिकांश मानिसले हर्ड इम्युनिटी गलत सोच हो भन्ने गरेका छन् । यसले जनसंख्याको एक ठूलो भागलाई मर्न छोडेको जस्तो हुने मानिसहरूले बताएका छन् ।
यस विषयमा दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, भाइरस लगभग सबैतिर महामारीको स्थितिमा उहिल्यै पुगिसकेको हो अनि मानिसहरूले हर्ड इम्युनिटी पाइसकेको भन्ने विषयमा प्रशस्त प्रमाण पाइन्छन् । अप्रिल महिनामा चरममा पुगेपछि कोभिडको मृत्युदर स्वाट्टै घट्नुको कारण के हो ?
दोस्रो, नयाँ नियन्त्रणहरूले भाइरसलाई सुस्त बनाएको वा रोकेको एकरत्ती प्रमाण छैन । अनि नियन्त्रण थोपरिरहेर हामीले भाइसलाई हावी हुन दिइरहेका हैनौं त ?
यस रोगलाई कोभिड–१९ भन्नुको पनि कारण छ । यो सन् २०१९ को क्रिसमसभन्दा अघिबाट नै संसारभरि फैलिरहेको थियो । कोभिडको मृत्युदर ह्वात्तै बढेर पछि स्वाट्टै घट्ने गर्दा भाइरस अब कमजोर भइसकेको स्पष्ट छ ।
घोषणापत्रमा निवारणात्मक उपायहरूको सिलसिला सूचीकृत गरिएको छ । जोखिममा रहेका मानिसले संक्रमणबाट बच्ने उपाय बताइएको छ । तर साँच्चै भन्ने हो भने हाज्मात सुट र पूर्ण प्रयोगशाला क्वारेन्टीनले मात्र महामारी बनिसकेको श्वासप्रश्वास भाइरसबाट मानिसलाई सुरक्षित राख्न सक्छ ।
संस्थापक पक्षका केही उपबुज्रुकहरू हर्ड इम्युनिटी खतरनाक सोच भएको बताउँदैछन् । अनि लङ कोभिड भनेर नयाँ शब्दावली बनाइएको छ । भाइरस लागेर निको भएकाहरूले लामो समय थकान अनुभव हुने र अन्य असर पर्ने भनी इंगित गरिरहेकोलाई सन्दर्भ बनाइएको छ ।
यस्ता टिप्पणीकार र सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्नेहरूले हडए इम्युनिटीलाई नरसंहार भनिरहेका छन् । स्विडेनले हर्ड इम्युनिटी हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दा यस्तो अतिशयोक्ति खुबै प्रयोग गरिन्थ्यो ।
तर हर्ड इम्युनिटी नरसंहार हैन । लकडाउनका नाममा मानिसलाई घरैमा थुनेर राख्नु चाहिँ अपराध हो ।